Dhac iyo Boob ku haya Xaafadaasi waxa eena Goordhaw Boobeen Dukaamo kuyaala Xaafadaasi ee ka qaateen waxii lacago ah ee yaalay iyo Meepeelo tiro badan . | Salaan Media
Dhac iyo Boob ku haya Xaafadaasi waxa eena Goordhaw Boobeen Dukaamo kuyaala Xaafadaasi ee ka qaateen waxii lacago ah ee yaalay iyo Meepeelo tiro badan .
War Deg Deg Ah Dhac iyo Boob Xoogan oo Xiligan kasoconaya Xaafad kamid ah Magaalada Muqdisho
Wararka aan hada ka heleyno Xaafada Raadeelka ee Degmada Dayniile ayaa sheegaya in xiligan uu halkaasi kasocdo Dhac iyo Boob Xoogan ee gasanayaan Kooxo hubeesan oo ku labisan Dareeska Ciidanka Milatariga Soomaaliya.
Ciidamada oo ah kuwa aad u Hubeesan ayaa xiligan xaafada gudaha ugu jira iyagoona Dhac iyo Boob ku haya Xaafadaasi waxa eena Goordhaw Boobeen Dukaamo kuyaala Xaafadaasi ee ka qaateen waxii lacago ah ee yaalay iyo Meepeelo tiro badan .
Kooxahan Dareeska Ciidanka Milatariga Dowlada Soomaaliya wata ayaa sidoo kale u dhacaya guryaha qaar sidoo kale waxa ee Moopeelada iyo dahabka ka qaadanayaan dadka xaafada aan ka warqabin ee kusoo dhaca goobaha ee ugaarsiga ka wadaan.
Xaafada ayaa hada inteeda badan u muuqata mid Bandow ah dadka ayaa xaafadahooda ku xarooday iyaga oo cabsi xoogan lasoo daristay , waxaa siodoo kale gabi ahaan la xiray goobaha ganacsi ee kuyaala Xaafada Raadeelka ee Degmada Dayniile.
Ma ahan markii ugu horeesay ee Dhac iyo Boob ragan katirsan Ciidanka Dowlada oo la rumeesan yahay in ee kasoo baxeen Xeryo ciidan oo kuyaala Wasaarada Gaashaandhiga iyo Xerada Tolmada ka geestaan xaafadaasi habeeno kahor ayey sidaan oo kale boob iyo dhac baahsan xaafaaasi uga geesteen.